President of Zimbabwe Robert Mugabe, speaking in Marange, says he will ignore anyone who desires mention of LGBT rights
President of Zimbabwe Robert Mugabe, speaking in Marange, says he will ignore anyone who desires mention of LGBT rights in a draft of the next constitution of Zimbabwe.
Sources: AFP via Google RTÉ
The Parliament of Zimbabwe summons ex-President Robert Mugabe over an alleged theft of diamonds.
Robert Mugabe resigns as the President of Zimbabwe shortly after impeachment proceedings are launched. It ends a period of his 29 years in office as President.
President of Zimbabwe Robert Mugabe is fired as the leader of ZANU–PF and replaced with former Vice President Emmerson Mnangagwa.
Former Vice President of Zimbabwe Joice Mujuru is expelled from the ruling party for allegedly planning a coup against President Robert Mugabe.
President Robert Mugabe of Zimbabwe makes his first public appearance in several weeks.
The European Union suspends sanctions against 81 officials and eight firms in Zimbabwe, but those against President Robert Mugabe and his top aides remain in place.
Zimbabwe President Robert Mugabe states that a power sharing deal with Morgan Tsvangirai should not be extended past its expiration in four months time.
Zimbabwe requests apologies from American, German and European Union envoys who walked out of the burial ceremony for President Robert Mugabe's sister; they refuse to apologise.
Two campaigners for LGBT rights in Zimbabwe are freed after spending six days in custody on charges of possessing pornographic material and insulting President Robert Mugabe.
President of Zimbabwe Robert Mugabe, in a speech at Harare's stadium, promises to continue his land seizure policy and transfer of control of foreign firms to locals as part of a black empowerment drive.